ဆန်အိတ်(၈၀)နဲ့ဆေးဝါးတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး ပြာပုံတွေကြားမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဆန်လေးတွေကို လိုက်ကောက်ယူနေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်လေး - Myanmarload
ဆန်အိတ်(၈၀)နဲ့ဆေးဝါးတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး ပြာပုံတွေကြားမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဆန်လေးတွေကို လိုက်ကောက်ယူနေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်လေး
လွန်ခဲ့သော ၁၄ နေ့ က 13:07 June 11, 2021
တောင်တန်းဒေသတွေမှာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ ဒေသခံတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတာကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာပြီး တောတောင်တွေထဲ ခိုလှုံနေရတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအရေအတွက်ဟာလည်း တစ်ဆထက်တစ်ဆပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းမှုအပြီး မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဒုက္ခတွေများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပေမယ့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖေးမကူညီကြရင်း ဆက်လက်ရှေ့ဆက်နေကြပါတယ်။ အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လည်း ပြည်သူတွေက တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပေးနေကြပါတယ်။
စစ်ဘေးရှောင်တွေကို ပြည်သူတွေက စားနပ်ရိက္ခာတွေ၊ဆေးဝါးတွေ၊အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့လှူဒါန်းကြပေမယ့် လမ်းခရီးမှာတင် ဖမ်းဆီးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာမျိုး၊အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေယူဆောင်သွားခံရတာမျိုးတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာလည်း ကယားပြည်နယ်၊ လွယ်ယင်းတောင်ခြေကျေးရွာက စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် ဆန်အိတ်(၈၀)နဲ့ ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေယူဆောင်လာတုန်း စစ်ကောင်စီတပ်တွေလာရောက်ပြီး အဆိုပါဆန်အိတ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။
အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့် စားဝတ်နေရေးပိုမိုကြပ်တည်းလာနိုင်တဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် ပြည်သူတွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်ဝမ်းနည်းနေကြပါတယ်။PKPFကတော့ " စစ်ဘေးရှောင်အတွက် ဆန် ဆေးဝါး ပစ္စည်းတွေကို စစ်တပ်က မီးရှို့ ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်. စစ်ရှောင်တွေအတွက် ဆန်အိတ် (၈၀)ဆိုတာ စစ်ရှောင်နေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ....ကလေးသူငယ်တွေ....အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ လူငါးရာစာ ခွဲတမ်းရှိပါတယ်. "ဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပြာပုံတွေကြားမှာ ဆန်လေးတွေပြန်ကောက်နေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်လေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Page generated in 0.5616 seconds with5database query and6memcached query.